PureWow Readers 'Top 10 Kacha zụrụ ngwaahịa si Nordstrom - Ejiji
PureWow Readers 'Top 10 Kacha zụrụ ngwaahịa si Nordstrom
Purewow Readerstop 10 Most Purchased Products From Nordstrom
Ichekwa ihe kacha amasị gị dị ọcha bụ PureWow, ọ dịkarịrị mfe, ekele maka atụmatụ Shop ọhụrụ anyị. Naanị pịa ihe ịchọrọ ịzụta, anyị ga-ejikwa ya na nchekwa ọ bụla na-ahapụ saịtị ahụ. N'ihi na anyị niile nwere ọtụtụ taabụ meghere dị ka ọ dị.
Dị ka onye na-edezi ejiji, aga m enwe obi ụtọ karịa ịtụ aro Kedu nke akpa Nordstrom bụ nkwụnye ego kachasị mma ma ọ bụ nke akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ n'oge okpomọkụ ga-adị mma ma nwee obi ụtọ maka ezumike ezumike gị ọzọ. Mana enweghị m ike ịnara otuto maka ewu ewu nke ụzọ iri ndị a nile - nke ahụ na-aga gị, ezigbo ndị na - agụ akwụkwọ. Ee, ndị a bụ uwe na ngwa na-ahụkarị ndị na-agụ PureWow. Dị ka ị ga-atụ anya, ha niile nwere ọtụtụ nyocha na-enwu gbaa na saịtị ahụ. Ya mere na-enweghị n'ihu oge, ebe a bụ iri Nordstrom ga-haves ị kwesịrị ịgbakwunye na ụgbọ ibu ASAP (ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ama).
Njikọ: Akpa kachasị mma maka ịzụ ahịa si Nordstrom's Half-Sale Sale
1. Ted Baker London Chhloee Akpụkpọ anụ Hobo akpa
Nke a na-adịghị agafe agafe Tote abịa na atọ na agba, nwere ike eyi na ubu ma ọ bụ dị ka a crossbody na mfe na-azụ niile mkpa gị maka ụbọchị na-enweghị mmetụta oke. Na-ekwu maka iyi egwu okpukpu atọ.
Akpụkpọ ụkwụ Chunky dị maka oge ọkọchị 2021, mana cushy a, ụzọ nkwado na-eche na ọ dabara nke ọma maka onye ọ bụla adịghị njikere ịfụcha akpụkpọ ụkwụ ha.
3. Ise nke itoolu & nke itoolu Austin 46mm Blue Light Nzacha iko
Chebe anya gị ka ọ ghara ịdị na-acha anụnụ anụnụ nke ekwentị gị nwere ike iwepụ, laptọọpụ na mbadamba ụrọ nwere iko iko na-adị mma n'ụwa niile. PS Ha na-abịa na-egbu maramara nwa, matte nwa na mbe mbe.
4. Ndozigharị York Coat
OK, ya mere gieleghi anyadoro anya na ọ gaghị enwe nnukwu uru na uwe a kpochapụla kpochapụ na izu ole na ole sochirinụ. Mana ọ dị ugbu a pasent 40 ma ọ ga-abụ nke ọ bụla dị ka nkecha ma na-ekpo ọkụ na-abịa ọdịda ka ọ na-eme ugbu a ka ọ bụrụ ọnye ego ị ga-eji eme ihe n'ọdịnihu ị ga-enwe ekele dị ukwuu.
Odikwa na nha S rue XL
5. Ray-Ban 51mm Hexagonal Flat Lens Ugogbe anya maka anwụ
Sunglass okpokolo agba nwere ike ịda mba ma too, mana Ray-Bans ga-abụrịrị n'ụdị. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ maka ọdịdị nke hexagonal, nke na-abụghị ụbọchị dị ka oghere gburugburu kama ọ na-enwe mmetụta dị mma karịa rectangles ọdịnala.
6. Zella Na-ebi Ndụ n’úkwù Leggings
A na-akpọ aha leggings ndị a Zella n'ụzọ dabara adaba, ebe ọ bụ na ị ga-achọ ibi ndụ gị n'ime ha ozugbo ị buliri otu ụzọ (ma ọ bụ atọ). Ha dị oke mma maka izu ụka izu ụka, enwere ike iji ejiji maka otu abalị na obodo ahụ ma wepụkwa ọsụsọ ma ị na-arụ ọrụ gị na isi yoga ma ọ bụ na-agba ọsọ.
7. Kate spade New York Roulette Large Akpụkpọ anụ Hobo akpa
Ee, akpa a na-abakwa na oji, mana ndị na - agụ PureWow (na nke gị n'ezie) na - ele mmadụ anya n'ihu na nke a na - acha ọcha na - adị oke ọnụ n'agbanyeghị agbanyeghị $ 300.
8. Teva Hurricane Drift Akpụkpọ ụkwụ
Sandkwụ akpụkpọ ụkwụ ndị a na-enweghị mmiri dị oke egwu ma jiri ụkwụ na-akwado ụkwụ a na-eme ka ọ dịrị ha mma maka ije ije ụbọchị.
9. Diptyque Figuier / Fig Osisi kandụl
Ọ bụrụ na anyị ejiri isi na-esi ísì ụtọ webata weebụsaịtị anyị, ọ nwere ike ịnwe otu ihe ndetu a dị ka kandụl Diptyque a kwadoro nke ọma, gụnyere ahịhịa ọhụrụ, osisi siri ike na, n'ezie, mkpụrụ fig.
10. Karen Kane Zebra Bipụta Bias Cut Skirt
Uwe mpempe akwụkwọ a dị mfe na-abịa n'ọtụtụ agba na usoro (nke dị mwute ikwu na edepụtara ha iche na saịtị), gụnyere floral na-enwu gbaa , ọla ntụ na enweghi mgbe nwa , ma rụọ ọrụ n'oge ọ bụla. Oh, na anyị kwuru banyere ugbu a 30 pasent apụ?
Njikọ: Nordstrom's Home Collection Is We jupụtara ọtụtụ Random & Bara Uru Ngwaahịa Did Amaghị na Need Chọrọ na Ndụ Gị (ma ọ bụ Kitchen)
nwanyi ntutu isi ọgwụgwọ eke
soda na lemon na ihu
ịhụnanya akụkọ na bekee na fim
wepụ ntutu site na ihu na ndammana
esi kwụsị ntutu daa ma regrow ntutu